RSS ဆိုတာဘာလဲ။ Feed ဆိုတာဘာလဲ။ Content Syndication ဆိုတာဘာလဲ။ အ | Martech Zone
RSS ဆိုတာဘာလဲ။ Feed ဆိုတာဘာလဲ။ Content Syndication ဆိုတာဘာလဲ။
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 25, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 13, 2021 Douglas Karr
လူသားများသည် software ပလက်ဖောင်းများကို content စားသုံးရန် HTML ကိုကြည့်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည် programming language များအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသော၊ ဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ရှိရမည်။ အွန်လိုင်းစံနှုန်း၏ပုံစံကိုခေါ်သည် feed တစ်ခုမရ။ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးပို့စ်များကိုဘလော့ခ် software ၌ထုတ်ဝေသောအခါကြိုက်နှစ်သက်သည် WordPressတစ်ဦး အစာ အလိုအလျောက်ထုတ်ဝေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်မင်းရဲ့ feed address ကို site ရဲ့ URL ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ feed /
RSS ဆိုတာဘာလဲ။ RSS သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
RSS ကိုကွန်ရက်အခြေပြုစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု (ပုံမှန်အားဖြင့်aလို့ခေါ်တယ်) အစာ or ဝဘ်ဆိုက်) အရင်းအမြစ်မှထုတ်ဝေသည် - ဟုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် ရုပ်သံလိုင်းမရ။ ထုတ်ဝေမှုရက်စွဲနှင့်စာရေးသူအမည်ကဲ့သို့ဖြည့်စွက်စာ (သို့) အကျဉ်းချုပ်စာသားနှင့် metadata တို့ပါ ၀ င်သည်။ RSS သည်သင်၏ site ၏အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးပုံများနှင့်ဗီဒီယိုကဲ့သို့အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ချိသည်။
လူအများစုသည် RSS ဟူသောစကားလုံးသည်မူလကတည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသော Syndication သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည် ကြွယ်ဝသောဆိုဒ်အကျဉ်းချုပ်... နှင့်မူလ RDF ဆိုက်အကျဉ်းချုပ်.
ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းကိုအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှု (RSS ကို) RSS feed အတွက် universal သင်္ကေတသည်ညာဘက်တွင်ဤပုံပေါ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်ထိုအမှတ်အသားကိုသင်မြင်လျှင်၎င်းကိုသင်သုံးလျှင်သင်၏ URL feed ကိုထည့်ရန်ရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများမပေါ်မချင်း feed feed သည်အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်လူအများစုက feed နဲ့ subscribe လုပ်မယ့်အစား online social media channel တစ်ခုကို follow လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါတောင်နည်းပညာကအသုံးချလို့မရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
RSS Feed သင်္ကေတ
ဒါက Feeds ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ တကယ် Simple Syndication (RSS) ရဲ့အားသာချက်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းပြနေတဲ့ Common Craft ကဗီဒီယိုဟောင်းတစ်ခုပါ။
Content Syndication ဆိုတာဘာလဲ။
RSS feeds များကိုသုံးနိုင်သည် စာဖတ်သူများကိုအစာကျွေးပါ နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာထုတ်ဝေ ပလက်ဖောင်းများ။ Feed Reader သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့မကြာခဏဖတ်လိုသောချန်နယ်များကိုစာရင်းသွင်းရန်နှင့်အပလီကေးရှင်းမှဖတ်စေနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာမွမ်းမံထားသောအခါ feed feed reader ကသူတို့ကိုသတိပေးသည်၊ အသုံးပြုသူသည်၎င်း site ကိုအမြဲမကြည့်ဘဲဖတ်နိုင်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများသည်ကြေညာသူများအား၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို၎င်းတို့၏လူမှုကွန်ရက်များသို့အလိုအလျောက်တင်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာ၊ ငါသုံးတယ် Feedpress ပါ LinkedIn၊ Facebook နှင့် Twitter တို့တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူမှုမီဒီယာအကောင့်နှစ်ခုလုံးသို့ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းရန် FeedPress ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏အစာကြီးထွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုသည်။
PS: မမေ့နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ RSS Feed ကိုစာရင်းသွင်းပါ!
Tags: အကြောင်းအရာစုစည်းrdf site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကြွယ်ဝသော site ကိုအကျဉ်းချုပ်RSS ကိုrss feed ကိုလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာအစာကျွေးခြင်းRSS ဆိုတာဘာလဲချန်နယ်ဆိုတာဘာလဲအစာကဘာလဲfeed channel ဆိုတာဘာလဲတစ် ဦး rdf site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲကြွယ်ဝသော site ကိုအကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲဝဘ်ဆိုက်ဘာလဲrss channel ဆိုတာဘာလဲတကယ်ရိုးရှင်းတဲ့စုစည်းမှုကဘာလဲRSS ဆိုတာဘာလဲ
ဧပြီ 25, 2007 မှာ 8: 14 pm တွင်
အဲဒီမှာ Doug။ ငါတကယ်နားလည်ခဲ့တာပါ!! ငါယုံကြည်တစ်ဝက်။
ဧပြီ 25, 2007 မှာ 8: 42 pm တွင်
ဝူးဟူး။ ခရစ္စတင်း မင်းအရမ်းစိတ်ရှည်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်များတွင် နည်းပညာပိုင်းအရ ပို၍ ပို၍ ရတတ်သည်။ နှေးကွေးပြီး လူတချို့ကို ကူညီဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
သင်သည် ဤအရာများတွင် နစ်မွန်းနေသောအခါတွင်၊ သင်ပြောနေသည့်အရာကို အခြားလူတိုင်းမသိကြောင်း မှတ်သားရခက်ပါသည်။
RSS ၏နောက်ဆုံးမှတ်စု။ ဆောင်းပါးပါ စကားလုံးများနှင့် ပုံများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရေးရန် ဤစာမျက်နှာကို ဖယ်ရှားရန် စိတ်ကူးကြည့်ပါ... အခြား မလိုအပ်သော အရာများအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ RSS ဖိဒ်တွင် ပို့စ်သည် ၎င်းနှင့်တူသည်။
ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ Google Reader!
ဧပြီ 26, 2007 မှာ 4: 38 AM
ကျွန်ုပ်၏ရှည်လျားသောလုပ်ရန်စာရင်း၏တစ်ခုမှာ Douglas ကို RSS အမှန်တကယ်ဘာလဲဆိုတာရှင်းပြချက်အနည်းငယ်ရေးရန် Douglas ကိုတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ is.
အဆိုပါ ကြိုတင်သတိပေးချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် Doug။ (ကျနော့်ဘလော့မှာ အပိုင်းအသစ်အတွက် လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်း ပါပါတယ် 😉)
22:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 16
ယခု ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် သင်ပြန်ဖတ်နေသည့်အချိန်ကို သင်ပြန်တွေ့သောအခါတွင် မည်သည့်ကွန်ပြူတာအကြောင်းအရာကို သင်အမှတ်ရစေမည်ကို တွေးတောနေမိသည်။